विवाहमा किन गणेश भगवानको पुजा गरिन्छ ? यस्तो छ गणेशजीको बिद्रोह – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ माघ ८, बुधबार १७:३७
मंगलम् भगवान बिष्णु मंगलम् गरुणध्वजः
मंगलम् पुण्डरिकाक्ष मंगलायः तनोहरि
“प्रत्येक शुभ कार्य गर्नु अघि पहिलो पूजनीय भगवान गणेशको पूजा गरिन्छ। विवाह जस्ता शुभ कार्यहरुमा गणेशलाई सबै देवीदेवताहरु मध्ये पहिलो स्थान दिइन्छ। जब उनको विवाहको कुरा आउँछ, यो अनौठो संयोग हो । विवाह भएको थियो। दन्त्यकथा अनुसार भगवान गणेश ब्रह्मचरी बन्न चाहन्थे। आफ्नो भाग्यको कारण यस्तो संयोग भयो कि उनको ब्रह्मचारी बन्ने संकल्प तोडिएको थियो, ती मध्ये एक वा दुई थिएन। तिनका अनेक कारणहरु थिए । ति मध्य रिद्धि र सिद्धि पनि हुन् ।
गणेशजीले तुलसीलाई दिएको श्राप ?
पौराणिक कथा अनुसार एक चोटि गणेशजी तपस्या गर्दै थिए, तब तुलसी त्यहाँबाट गइन् र उनलाई देखेर मोहित भइन् । तुलसी गणेशजीसँग विवाह गर्न चाहन्थिन्, तर गणेशजीले उनको विवाह प्रस्ताव ब्रह्माचारीको रूपमा अस्वीकार गरे, भगवान गणेशले तुलसीको विवाहको प्रस्ताव अस्वीकार मात्र गरेनन् उनलाई दुई श्राप समेत दिएका थिए । पहिलो, हे तुलसी तिम्रा दुई विवाह हुनेछ एक राक्षस संग विवाह हुनेछ। दोस्रो श्राप यो छ कि तिमीलाई मेरो पुजामा कहिल्यै प्रयोग गरिने छैन । त्यसकारण तुलसिको मोठमा कहिल्यै पनि गणेश जीको मुर्ति वा गणेश सुपारि समेत राखेर पुजा गर्न हुंदैन । अर्को कुरा गणेश भगवानलाई मानिसहरूले तुलसी चढाएपछि क्रोधित हुन्छन् ।
कथामा के छ भने भगवान गणेश ब्रह्माचारी बन्न चाहन्थे किनकि उनी आफ्नो शरीरसित क्रोधित थिए। उनको पेट फैलिरहेको थियो, उनको अनुहार हात्तीको टाउको थियो, त्यसैले कोही पनि उनीसँग विवाह गर्न चाहँदैनथे उनि त्यस्तै सोच्थे । यसबाट विचलित भएर उनले ब्रह्मचर्यको अनुसरण गर्न थाले। उनलाई आफैँदेखि रिस उठेको कारण जहाँ पनि विवाह भएको ठाउँमा बाधा पुर्‍याए जसले गर्दा तिनै लोकमा बिबाह हुन रोकिन थाल्यो । यदि सम्भव छ भने उसले कसैलाई पनि विवाह गर्न नदिने गर्न थाले । देवीदेवताहरू यस बानीबाट धेरै विचलित भए । गणेशको यस्तो चालचलन देखेर ब्रम्माजीलाई पनि ठुलो चिन्ता पर्यो ।
आजित भएका सम्पुर्ण देबताहरु मिलेर एकदिन ब्रमाजीसँग समाधान निकाल्न भन्दै बिन्ति गरे । यस्तो गम्भिर समस्याको समाधान गर्नकालागि ब्रम्माजीले गणेशलाई बोलाउनुभयो । त्यसपछि दुई केटीहरू रिद्धि र सिद्धी योगको बलमा श्रृजना गर्नुभयो । दुबै ब्रह्माजीको मानस छोरीहरू थिए । उनिहरुलाइ गणेशलाइ जसरि भएपनि अरुको बिबाहमा रोक्ने कुराको अन्त्य गर्न उपाए लगाउन जिम्मा दिइयो । ब्रह्माको आज्ञाले ती दुबैले गणेसको चियोचर्चो गर्न थाले। जब गणेशजीलाई कसैको विवाहको बारेमा थाहा भयो, ऋद्धि र सिद्धीले उनलाई र मुसालाई अलमल्याए। यसरी सबैले बिहे गर्न थाले ।
एक दिन गणेशलाई सबैले बिबाह गरेको सबै सूचना पाए विवाहहरू कुनै अवरोधविना गरिएको थियो। गणेशजी ऋद्धि सिद्धिसंग रिसाए र श्राप दिन थाले। त्यसपछि ब्रम्मा आएर तत्काल त्यसो नगर्न सुझाब दिए । गणेशलाई सान्त पार्न ब्रह्माजीले गणेशलाई ऋद्धि र सिद्धिसँग विवाह गर्ने प्रस्ताव राखे। यस पछि उनीहरू दुवैले ठूलो धुमधामको साथ विवाह गरे। गणेश जि का दुबै पत्नि ऋद्धि र सिद्धी बाट एक एक पुत्र जन्पिए जसको नाम शुभ र लाभ राखियो । त्यसपछि देखिनै बिबाहको शुरुमा गणेशको उपासना गर्न थालिएको हो भन्ने धार्मीक मान्यता रहेको छ ।
महरामाथि लागेकाे बलात्कारकाे आराेपको खण्डन
२०७६ आश्विन १४, मंगलवार ०२:१०